Maazị Nduku na-agbasa ọkwa kwupụtara ohere ohere - Potatoes News
Maazị Nduku na-agbasa ọkwa na-ekwupụta ohere ndị Franchising
Gourmet kwajuru poteto! The Original Crab Pot, Chicken Bacon Ranch and Chicken Fajita.. just just a few of their many options! Okpokoro Okpokoro Na Akuku, Chicken Bacon Ranch na Chicken Fajita.. just a few of their many options!
Mgbe 2020 bụ ihe ịma aka, ụlọ oriri na ọ blackụ blackụ ojii nwere ezinụlọ, Maazị Potato Spread, hụrụ ya dị ka oge dị mkpa iji mee ma ọ bụ mebie ha.
Ndị guzobere ya, na ndị otu di na nwunye, Aaron na Lakita Spann, hụrụ ya dịka ohere ibilite na mmemme ahụ, na-agbanyeghachi n'otu udo na uche nke mere ka ha si na-eje ozi nduku ebu site na kichin ụlọ ha, wee banye na azụmahịa kichin, gaa n'ụgbọala nri, wee gaa n'ụlọ nri QSR mbụ ha ma na-enyezi ohere ịme aha.
Lakita kwuru, sị: "Nke a abụwo ihe mgbaru ọsọ ogologo oge maka otu anyị." "Nkwado na agbamume anyị nwetara kemgbe ọtụtụ afọ na-ejere obodo anyị ozi akwadebela anyị maka nke a ma anyị nwere obi ụtọ maka steeti ndị ọzọ, obodo, na obodo iji nwee ike ịre nri anyị."
Nchịkọta Maazi nduku gbasara ọtụtụ nduku isi nhọrọ ejiri ọtụtụ anụ na chiiz na salad. Ndị ahịa nwekwara nhọrọ ịhazi ihe ndị ha kere.
Ihe kachasị amasị ya bụ Crab Pot- ihe a na-ahụkarị edenyere aha ha na poteto, na-ebu shrimp, anụ nsị, soseji na-ese anwụrụ, ọka kernel dị ụtọ, akwa sie sie ike, mbinye aka ofe ma tinye ya na Mr. Hog Heaven, Chicken Bacon Ranch na ndị ọzọ.
Aaron na Lakita ga-eji Franchise Onye Okike, ụlọ ọrụ mmepe aha nke dị na Miami, FL, nye ohere abụọ aha aha: ebe brik na-ngwa agha ma ọ bụ nnukwu ụgbọala.
Brickdị brik na-mortar chọrọ ego ikike $ 25,000 otu oge na atụmatụ mbido mbụ nke $ 133,800 na $ 196,300, ebe ụgbọala na-ebu nri chọrọ $ 20,000 ego na ntinye ego nke $ 83,400 na $ 109,700.
Ohere abuo a nyere ndi franchise ohere ohere nke ghota ihe omuma banyere ihe omuma, ezigbo ala / nri ugbo ala, akuku kichin nile, ngwa ahia, onunu na ego onwa ato n’ime uru ndi ozo. Akwụ ụgwọ Franchise ga-elekwasị anya na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ.
Lakita kwuru, sị: “Anyị na ụlọ ọrụ mmepe na-emekọrịta ihe dị anyị mkpa. “Anyị chọrọ inye franchisees a zuru ngwugwu site a streamlined usoro iji kwadebe ha maka akụkụ nile nke azụmahịa si menu nkwadebe na bookkeeping na ahịa. Anyị chọrọ ka ha nwee ihe ịga nke ọma. ”
Tags: Maazị NdukuRestaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Qụ QSR
Na Ya Ọnụ
Ọhụrụ - Fiesta Fries, Ka anyị mee ememme!
Sunfeast ITC na-ama Aka Banyere Nri Bangladesh
Fan-ọkacha mmasị ude ude & yabasị Pringles na-enweta nkwalite
Walmart wetara Frito-Lay's 'Flavors From India' Chips Chips na Canada
Ndị ọrụ nyocha kwuru na ụnwụ nri nke nduku Irish butere ntiwapụ na kọntinenti isii
Ọnwụnwa ozuzu nduku Texas A&M na-enye Reds, Russets, Babies na Baker
INVENTURE FOOD NA-agbakwunye KETTLE-COOKED POTATO CIP Mepụta ihe na ụlọ ọrụ